Dugsiyada xukuumadda ee gaarka ah, shan heer gobal ah iyo seddax heer qaran ah, ayaa qaadanaya ardayda u baahan wax ka beddelan dugsiga hoose-dhexe ee caadiga ah.
Waa waalidka kuwa codsanaya haddii canuggoodu uu dhiganayo dugsi gaar ah. Haddii ardaygu uusan degganeyn meel uu gaadiid uga soo gaaro maalin walba waxaa xilli dugsiyeedka jira fursado deegaan iyo waqti firaaqo oo firfircoon.
Dugsiyadeenna gaarka ah ee heerka gobal
Ardayda dhagoollada ah ama maqalkoodu uu hooseeyo waxaa ay dhigan karaan dugsiyadeenna gaarka ah ee heer gobal. Wax dhigiddu waa laba luqadoodle, waxaana ay si ahaan ku baxaysaa luqadda dhagoollada swiidhishka, si ahaanna swiidhishka lagu hadlo ama la qoro.
Dugsiga gaarka ahi waxaa uu siinayaa jawi luqadeed oo siinaya shuruudo ah in meel kasta oo dugsiga ah lagula kulmo, laguna adeegsado luqadda dhagoolayaasha iyo swiidhishka. Laba luqadlanimada waxaa ku kordhaya fursadaha ardayga ee ku aaddan sii wadashada waxbarashada iyo ka qeyb qaadashada bulshada.
Kristinaskolan oo ku yaalla Härnösand
Manillaskolan oo ku yaalla Stockholm
Birgittaskolan oo ku yaalla Örebro
Vänerskolan oo ku yaalla Vänersborg
Östervångskolan oo ku yaalla Lund
Dugsiyada heer qaran ee gaarka ah
Dugsiyada ardayda ka qaata waddanka oo dhan waxaa ay leeyihiin kooxo bartilmaameed oo kala duwan. Wax dhigidda, jawiga iyo qaabka loo wada xiriiro waxaa ay waafaqsanyihiin halka baahida ardaygu ka dhaqaajineyso.
Åsbackaskolan ee ku yaalla Örebro, waxaa loogu tala galay ardayda maqalka ka ah naafada isla markaasna koorintaakoodu kala dhantaalanyahay iyo ardayda ku dhalatay dhagoolnimada. Dugsigu waxaa uu bixinayaa waxbarasho ka duuleysa arday walba duruufihiisa iyo baahidiisa. Waxaan culeys weyn saareynaa in aannu horuumarinno rabitaanka ardayga iyo doonistiisa wadajiridda, isla ciyaaridda iyo ku wada xiriiradda jawi laba luqadlanimo.
Hällsboskolan ee ku yaalla Stockholm iyo Umeå, waxaa loogu tala galay ardayda jiha wareerka adag ee luqadeed qaba. Dugsigu waxaa uu bixinayaa waxbarid xoogga saareysa luqadda iyo siyaabo kala duwan kuwada xiriiridda. Waxaa ay ku dhaceysaa jawi waxbarasho la waafajiyay kooxda bartimaameedka ah, kana amba qaadeysa baahida shakhsi ee uu ardaygu leeyahay.
Ekeskolan ee ku yaalla Örebro, waxaa loogu tala galay ardayda aragga naafada ka ah isla markaasna qaba naafanimo dheeraad ah. Dugsigu waxaa uu soo bandhigayaa wax dhigid waafaqsan aragtida oo ku aaddan maaddooyinka dugsiga iyo wax dhigid xagga qoraalka dhibca-dhibcaha, jiheyn iyo guurguurid, iyo tababar isku filnaansho iyadoo laga amba qaadayo ardayga baahidiisa shakhsiga ah.
In arday lagu ahaado mid ka mid ah dugsiyadeenna gaarka ah
Waxaannu ardayda siineynaa jawi fursad u siinaya ka qeyb qaadasho iyo horuumarinta. Qof walba waa uu ka qeyb qaadan karaa wada ciyaaridda bulshannimo, dareemi karaa ka mid tirsanaansho, wuuna horuumarayaa ka qof ahaan.
Waxa wax dhigidda dugsiga gaarka ahi ay ka koobantahay wax la xusi karo ugama duwana waxa lagu dhigo dugsi hoose-dhexe. Kuwa ka shaqeeya dugsiga gaarka ahi waxaa ay khubaro ku yihiin si ay waxbarashada uga dhigaan mid u furan kooxda bartilmaameedka dugsiga u ah.. Dugsiga gaarka ahi waxaa uu leeyahay macallin tiro badnaansho sare iyo kooxo wax loo dhigo oo yar-yar si loo awoodo in ardayda baahidooda la daboolo iyadoo laga duulayo hadba duruufahooda shakhsiga ah. Dugsiga gaarka ahi waa toban sano. Waxaa dheeri ah in dhammaan dugsiyada gaarka ah ee ku jira Hällsboskolan ee ku yaalla Stockholm ay bixinyaan fasal dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta ah
Publicerat måndag 21 maj 2018